यिनै हुन दुई महिला जसले दाङ भालुबाङमा एक महिलाको कपडा च्याति कुटपिट गरेका थिए ! – Todays Nepal
यिनै हुन दुई महिला जसले दाङ भालुबाङमा एक महिलाको कपडा च्याति कुटपिट गरेका थिए !
रेखा र अनिताले कुटपिट मात्रै गर्नुको साथै दिलमायालाई सार्वजनिक रुपमै निवस्त्र बनाएर बदनाम गर्ने दुस्साहासी र अमानवीय हर्कत गरेको प्रहरी निरीक्षक पाण्डेले सेतोपाटीलाई बताए।
सोमबार ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा पतिसँगै जाहेरी दिन गएकी दिलमाया पुन। तस्विर सौजन्यः नेपाल प्रहरी।
शहीदको सपना बिर्सेर प्रचण्डले पार्टीलाई एमाले रूपी फोहोर समुन्द्रमा मिसाइदिए: भट्टराई